Umhlahlandlela Ukusuka Semalt: Izinyathelo Ezingu-9 Zokuhlela Iwebhusayithi Yezokuhlela
Kuba nzima kubanikazi bewebhusayithi ukuhlela nokuthuthukisa okuqukethwe kubasebenzisi babo,ngenkathi kusebenzisana nabanye. Noma kunjalo, kusekhona njalo ukuphatha okuqukethwe kwewebhusayithi ngokuphumelelayo
uMax Max, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt ,izincomo ezilandela izinyathelo ezingu-9 njengesiqondiso sokuthola nokushicilela okuqukethwe okulungile
1. Hlola Ikhophi Yamanje
Ngaphambi kwanoma yini enye, ukuhlolwa kwekhophi yamanje kuhlakaniphile njengoba kubonisaamaphutha noma izinto ezidinga ukubuyekezwa. Ukuhlukanisa okuqukethwe nokunikezela izinjongo ezithile kula maqembu kwenza kube lulaqinisekisa ukuthi isayithi liletha ukwaziswa okubalulekile kuphela.
2 - top it development companies. Thola abalaleli ababhekele
Ibhizinisi kufanele likwazi ukuthi likhuluma nobani ngaphambi kokudala okuqukethwe. Ukuqondanoma ukukhomba izethameli ezihlosiwe kusiza ukunikeza ukucaca ngesikhathi sokuhlela. Ihlola ukuthi ngabe ulwazi olulodwa luhlose ukufakakuyadingeka noma kucace ngokwanele. Ibuye ibonise izethameli eziyinhloko, eziyisibili, nezethakeme ukuqinisekisa ukuthi isayithi lithatha bonkeizivakashi zayo.
3. Sebenzisa i-Sitemaps
I-Sitemaps isenzo njengezinhlelo. Ngaphandle kwalo, isayithi angeke lifeze zonke izinhloso zalonoma wabela okuqukethwe ekhasini layo elifanele. Izinhlelo eziningi ezahlukene nezinhlelo zokusebenza ze-software zikhona ukusiza ukuklama nokuhlela imininingwane ku-aiwebhusayithi. Izibonelo ezinjalo zifana ne-Chart Chart ku-Microsoft Word kanye namathuluzi wama-XMind ahamba phambili mahhala. Qalisa ngobuningiokuqukethwe ukuze ubone ukuthi ikhasi elilodwa lingakwazi ukukuqukatha noma lingadinga izigaba ezingaphansi. Ngokwenza konke lokhu, kuba lula ukubeka phambili futhilungisa kabusha izinto kuwebhusayithi.
4. Ukubambisana nabanye
Ukubandakanya abanye abantu ekubuyekezeni nasekuhleleni iziqinisekiso ukuthi okuqukethwe kuquketheakukho amaphutha okugammatical futhi anengqondo kwabanye. Ukusebenzisana kuvumela amanye amaqembu ukuba ahlanganyele..Amafayela angabodwa kuwo wonke umkhawulo wokuqukethwekungenzeka ukuthi lokhu kusebenzisana nabathuthukisi bokuqukethwe kufanele bakugweme. I-Google Amadokhumenti ne-JumpChart kukhona ukubambisana kokuqukethwe kwewebhuamathuluzi avumela abasebenzisi abaningi ukuba banikeze impendulo.
5. Ukutshela Ukuphikisana Nokuthengisa Indaba
Abanye abantu banomuzwa wokuthi amawebhusayithi abo athola ithuba lokukhuluma ngebhizinisiindaba. Ngokuphambene nalokhu, kufanele utshele izindaba zabanye abantu okungenzeka bazuze ngokuhlanganyela nemikhiqizo noma amasevisiunikezwa kusayithi. Konke okubalulekile kuwubufakazi futhi kusho ngendlela eqondayo. Umkhiqizo noma isevisi idinga ukugcwalisa igebe lesidingo,ngamaphuzu okulula okufundwayo mayelana nezinzuzo ezitholwa kumsebenzisi.
6. Bhala abantu kanye nezinjini zokusesha
Ibhizinisi akumele lifake amagama amaningi angukhiye kokuqukethwe, kuze kube yilapho elahlekelwaincazelo yalo noma engafundiwe. Kubandakanya le migomo kulo lonke umbhalo ngokuzenzakalelayo kuqinisekisa ukuthi abafundi bazobona okuqukethwe. Futhi,ukusebenzisa amagama angukhiye we-semantic ukufaka esikhundleni samagama angukhiye ayisisekelo ayishintshi incazelo yokuqala yendaba.
7. Yenza ikhophi ehlose ukusebenza
Ekupheleni kokuqukethwe, kufanele kube nombhalo otshela izivakashi ukuthi yisiphi isinyathelokufanele bathathe okulandelayo. Ikheli le-imeyli noma isixhumanisi sekhasi lokuxhumana sivumela isenzo esilula kubathengi ngenkathi ibhizinisi lisenhlayengqondo yabo.
8. Isikhalazo sokubukwa
Kubandakanya izithombe ezisekela, amashadi, nemifanekiso iqinisekisa ukuthi ikhophikubukeka kuhle njengoba kusebenza. Ukuphulwa kombhalo ngezingcaphuno ezinkulu zokudonsa noma ubufakazi, noma ukusebenzisa uhlu lwezinhlamvu luyasebenza kakhulu kubasebenzisiokhetha ukubheka ematheksthini. I-typeface yekhophi inendima ebalulekile okufanele idlalwe ekuqinisekiseni ukufaneleka kwekhophi.
9. Izikhathi zokugcina
Ukubeka izikhathi zokukhokha zabantu ngabanye kanye namaqembu aqinisekisa ukuthi amaphrojekthihlala endleleni. Enye indlela yokwenza lokhu ukuhlela ukudala okuqukethwe kokuqukethwe zibe izingxenye ezifanele futhi usebenze ngesikhathi esisodwa. Mayelana nesigabakufanele ibe phakathi kokuqala ngoba ibeka ithoni futhi ihlonza ukuthi yini okufanele igxile kuyo njengoba iphrojekthi iqhubeka. Izinsiza zokugcina zisiza ukusethalapho ukuhambisa umsebenzi wokubuyekezwa nabathintekayo, nokuthi nini ukuhlanganisa konke okuqukethwe kwisayithi.
Ukuhlela Iwebhusayithi kudinga isikhathi ukuhlela nokusebenzisa isu. Ngokusebenzisangale ndlela, kuba lula ukuveza okuqukethwe kwekhwalithi nokungenaphutha kwisayithi.